विज्ञान भन्छः अन्डा शाकाहारी नै हो, तर कसरी ? | सुदुरपश्चिम खबर
विज्ञान भन्छः अन्डा शाकाहारी नै हो, तर कसरी ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ 58
तर, पछिल्लो समयमा विज्ञानले भने अन्डा शाकाहारी भएको पुष्टि गरिसकेको छ। वैज्ञानिकहरुका अनुसार अन्डामा बाहिरी बोक्रा, सेतो र पहेलो गरी तीन भाग हुन्छ। सेतो भागमा प्रोटीन हुन्छ भने पहेलो भागमा प्रोटीन, कोलेस्टेरोल र फ्याट हुन्छ।
हामीले खाने अन्डा निषेचित (फर्टिलाइज्ड) नभएको हुनाले त्यसबाट चल्ला कोरिलिने सम्भावना हुँदैन। त्यही भएर वैज्ञानिकहरुले अन्डालाई शाकाहारी पुष्टि गर्दै वर्षौदेखिको विवाद अन्त्य गरिदिएका छन्।शरीरमा पौष्टिक पदार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि अन्डा खानुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।
अन्डालाई अत्यधिक पौष्टिक पदार्थ मानिन्छ। एउटा ठूलो अन्डामा ६ ग्राम प्रोटीनका साथै भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ। वास्तवमा अन्डाको पहेलो भाग शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न चाहिने कोलिन भन्ने तत्त्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्रोत हो। कतिपय शाकाहारी व्यक्तिले मासु र माछा नखाए पनि अन्डालाई पोषक खानेकुराका रुपमा छनोट गर्छन्।
कुनै शाकाहारी व्यक्तिले अन्डा खायो भने उसलाई फरक नामले सम्बोधन गरिन्छ। शकाहारीका पनि विभिन्न प्रकार रहेका छन्। अन्डा, माछा र मासु नखाने तर दूध मात्र खाने शाकाहारीलाई लेक्टो–भेजेटरियन भनिन्छ। मासु, माछा र दूध नखाने तर अन्डा चाहिँ खानेलाई ओभो भेजेटरियन भनिन्छ। त्यसैगरी, मासु र माछा नखाए पनि अन्डा र दूध चाहिँ खानेलाई लेक्टो–ओभो भेजेटरियन भनिन्छ। मासु, माछा, दूधजनयअन्डा, महजस्ता जनावरको कुनै पनि उत्पादन नखाने व्यक्तिलाई भेगान भनिन्छ। gnewsnepal.com बाट सभार